China FPGA Yakakwira-Yekumhanya Circuit Bhodhi Musangano Kugadzira uye Fekitori | KAISHENG pcb
PCBFuture inogadzira pcb uye pcb gungano rekambani. Iine anopfuura makore makumi maviri ekushamisa kwakanaka, yepasirese tarenda uye matsva mabudiro, PCBFuture yasvika nzira yakareba yekuve imwe yeChinese inotungamira PCB vagadziri uye vagadziri nhasi. Yedu yekutarisisa pamhando yepamusoro uye ine hupfumi inoshanda masystem akasanganiswa neasingaenzaniswi kuenderana akatiita isu kusimbisa kwesarudzo muChina yese.
Metal bemhapemha: Electrolytic Nickel / Yakaoma Goridhe uye Inosarudza Goridhe
Akaturikidzana 12 rukoko pcb
Base Material: FR-4 + RO4003C
Midziyo Yesimbi: Electrolytic Nickel / Yakaoma Goridhe uye Inosarudza Goridhe Mamiriro Ekugadzira: SMT + Germinales: 12 rukoko pcb
Zvinhu Zvekutanga: FR-4 + RO4003C Certification: SGS, ISO, RoHS MOQ: Kwete MOQ
Solder Mhando: Lead-Yemahara (RoHS Inoenderana) Imwe-Stop Services: Pcb Kugadzira Uye Turnkey PCB musangano Kuedzwa: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Keywords: Pcb Assembly, gadzira pcb, Pcb Population, pcb Assembly Vagadziri, pcb Assembly Mutengo, Yakachipa pcb Assembly, Yakadhindwa Circuit Board Assembly Makambani
Nei sarudza PCBFuture?
1. Simba rekusimbisa
SMT semusangano: isu takatumira kunze michina yekuisa uye akawanda Optical yekuongorora michina, iyo inogona kuburitsa mamirioni mana mapoinzi pazuva. Maitiro ega ega akashongedzerwa nevashandi veQC kuchengetedza mhando yechigadzirwa.
DIP yekugadzira mutsetse: Iko kune maviri emasaisai emoto michina Vashandi vane hunyanzvi mukuwisira akasiyana plug-in zvinhu.
2. Hunhu kuvimbiswa, kudhura kuita
Yakakwira-magumo michina inogona kunama chaiyo yakaumbwa zvikamu, BGA, QFN, 0201 zvinhu. Inogona zvakare kushandiswa senge modhi yekuisa manyore uye kuiswa kwezvinhu zvakawanda. Ose sampuli uye makuru uye madiki batch anogona kugadzirwa.
3. Zvakafuma ruzivo muSMT uye kugadzira zvigadzirwa zvemagetsi, kugadzikana kuendesa
Govera akaunganidzwa masevhisi ezviuru zvemakambani emagetsi, anosanganisira SMT chip yekugadzirisa masevhisi emhando dzakasiyana dzemidziyo yemotokari uye maindasitiri ekudzora mamaboodi. Zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope neUnited States Kazhinji, uye mhando yacho inogona kusimbiswa nevatengi vatsva nevakuru.
Izvo zvinhu zvinozoendeswa nenguva mukati memazuva matatu kusvika mashanu apera, kana ivo vanogona kununurwa pazuva rimwe chete.
4. Iyo yakasimba yekugona kugona uye yakakwana mushure-yekutengesa sevhisi
Iyo injinjini yekugadzirisa ine ruzivo rwakapfuma uye inogona kugadzirisa zvigadzirwa zvakaremara zvinokonzerwa nemhando dzakasiyana dzekugadzirisa, uye isu tinogona kuve nechokwadi chekubatanidza mwero wedunhu rega redunhu.
Basa revatengi rinopindura chero nguva mukati maawa makumi maviri nemana uye gadzirisa odha yako nekukurumidza sezvazvinogona.
Iyo PCBA yekugadzira maitiro:
SMT chigamba kugadzirisa
Yapedza chigadzirwa gungano
The zvakanakira maindasitiri kudzora bhodhi PCBA foundry zvinhu zvePCBFuture:
Mutengo wakaderera wekutenga. Tine vashandi vekutenga zvinhu vane hunyanzvi mune zvemagetsi zvigadzirwa uye vane kwenguva yakareba mushandirapamwe nemhando yepamusoro uye yakavimbika nzira dzekutenga. Izvo zviri chaizvo kuwana zero zvinhu MOQ mutengo.
Deredza mutengo wevashandi, isu takashongedzerwa nekutenga kwemagetsi, mainjiniya emagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi uye zvikamu zveIQC, vatengi havafanirwe kumisikidza.
Kuti tideredze zvinhu zvemutengo, isu takashongedzwa nemhando dzakasiyana dzemagetsi ekuongorora michina, vatengi havafanirwe kumisikidza.
Kunyanya kudzikisa mutengo wekutaurirana, vatengi havafanirwe kumisikidza akawanda mbishi yezvinhu vatengesi, isu tinozovabatsira kupedzisa sevhisi.
Iwo akajeka mabasa. Kana paine dambudziko remhando yepamusoro, mutengi haafanire kutonga kuti iri dambudziko rezvinhu zvisina kugadzirwa kana dambudziko rekugadzira. Isu tine basa rakazara.
PCBFuture inogadzira PCBA OEM iyo inogona kupa vatengi nehunyanzvi hwePBB yekugadzira, kutenga zvinhu, PCBA imwechete-yekumira kugadzirwa nekukurumidza uye mamwe emhando yepamusoro masevhisi nevatengi. Kana iwe uine chero mibvunzo kana kubvunza, inzwa wakasununguka kubatasales@pcbfuture.com , isu tichakupindura iwe ASAP.
Pashure: Flex pcb Assembly masevhisi
Zvadaro: Industrial Kudzora Bhodhi Yakazara Turnkey Assembly